Jirama : maloto ny rano tonga any an-tokantrano | NewsMada
Nanomboka ny faran’ny herinandro teo, maloto tanteraka ny ranon’ny Jirama mamatsy ny tokantrano eto Antananarivo sy ny manodidina. Ho an’ny faritra sasany, miloko mavo na volontany ny rano mandeha amin’ny paompy.
Any amin’ny toerana sasany kosa madio mangatsakaka ny rano mivoaka amin’ny paompy. Rehafa apetraka elaela anefa dia misy fotaka mitsika any amin’ny fanambanin’ny siny misy ilay rano.
Miteraka fimenomenonana betsaka ho an’ny mponin’Antananarivo ity rano maloto vatsiana isaky ny tokantrano ity. Tsy ahenoana feo ny tompon’andraikitry ny Jirama mitondra fanazavana.
Mangina tsy miteny ihany koa ny fanjakana sy ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny na dia efa miharihary izao aza fa rano maloto tsy mahasalama no haparitaka eto Antananarivo. Tsy afa-mitroatra ny vahoaka fa miaritra izay miseho eo.
Any amin’ny tambajotra sosialy anefa efa miteraka resabe ity ranon’ny Jirama ity. Miakatra hatrany ny vidin-jiro sy rano alaina amin’ny isan-tokantrano, kanefa ny tolotra omena ny mpanjifa mitotongana hatrany.
Ankoatra ny fakobe sy ny haratsian’ny lalana, mbola resaka mafana eto an-tanàna ity jiro sy ranon’ny Jirama ity. Heverina mba ho tafiditra ao anatin’ny vinan’ny taona 2016-n’ity orinasa ity ny fitsinjovana ny mpanjifa.
Une réponse à "Jirama : maloto ny rano tonga any an-tokantrano"
Josoa Andrianavony 11/01/2016 à 14:41
Raha ny hevitro manokana efa hatramin’ny ela dia inona moa no tsy nanomezana azy io ho tantanan’ny “Symbion Power”; efa hita miharihary anie fa tsy vitan’ny fanjakana intsony ny mitantana ny JIRAMA e ! Raha omena izay heverina fa mahavita azy ka raha izay no vahaolana itsinjovana ny vahoaka mpanjifa, inona ny olana ? ? ?